Vaovao momba ny iPhone | IPhone News (Pejy 14)
Apple Pay dia misy amin'ny 50% an'ny mpivarotra amerikana ankehitriny
Efa ho efa-taona taorian'ny nanombohana ny Apple Pay, ity haitao fandoavam-bola tsy misy tariby ity dia efa misy amin'ny 50% amin'ireo mpivarotra any Etazonia.
Apple dia mitanisa loharanom-mozika mifanaraka amin'ny HomePod
Tao Cupertino dia tsara fanahy izy ireo nizara lisitra iray miaraka amin'ireo loharanom-peo mifanaraka amin'ny HomePod ary hasiantsika antsipirihany amin'ity lahatsoratra ity.
Tsy nisy olona nangataka izany, fa ho tonga amin'ny iPad ny Microsoft Edge
Toy izao no nandosiran'ny ekipa fampandrosoana Microsoft Edge fa efa eo am-pitsapana ny fampiharana ary ho avy tsy ho ela amin'ny iPad.
Apple mandefa fandaharana famerenana bateria amin'ny alàlan'ny rindrambaiko fanohanana any Canada
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia afaka manomboka mandray famandrihana ho an'ny programa fanoloana bateria amin'ny alàlan'ny fampiharana iOS Support mihitsy.
Apple dia namaly ny governemanta amerikana ho an'ny fanadihadiana misokatra
Tsy niandry ela fa nivoaka ny fanadihadiana ny orinasa Cupertino, andao jerena ny vaovao nozaraina.
Ny fampiharana IPad dia ho tonga amin'ny macOS amin'ity taona ity
Ny orinasa Cupertino dia mikasa ny hanao fampiharana iOS ho an'ny iPad hifanaraka amin'ny macOS alohan'ny faran'ny taona.
Mbola mahagaga ihany ny ARKit, saingy betsaka noho izany ny kinova 1.5
Ny ARKit kinova 1.5 dia mihatsara amin'ny lafin-javatra mahaliana sasany amin'ilay fitaovana ary manampy vaovao izay hahatonga ireo mpamorona hamorona fampiharana tsara kokoa.
Ny beta manaraka amin'ny iOS 11.3 dia hahafahantsika manafoana ny fihenan'ny fampisehoana
Ny orinasa Cupertino dia mikasa ny hampiditra an'io famonoana io na fanamboarana haingana dia haingana amin'ny fanavaozana ny iOS 11.3 beta manaraka
Nintendo dia nanambara ny kinovan'ny Mario Kart ho an'ny finday avo lenta
Nintendo dia manambara ny lalao vaovao ho an'ny finday izay tsy ho zavatra hafa ary tsy latsa-danja noho ny kinova an'i Mario Kart izay ho tonga amin'ny 2019
Ny fanjifana ny HomePod amin'ny heriny feno dia kely noho ny jiro LED
Ny fanjifana angovo atolotry ny HomePod antsika amin'ny fahafaha-manao feno, fitendrena mozika, dia ambany noho ny atolotry ny sokajy A jiro ambany fanjifana.
Apple dia manala ny Telegram ao amin'ny App Store mba hiseho ora maromaro aorian'izay
Telegram dia nesorina tao amin'ny App Store raha ny voalazan'ny CEO iray ihany no nanamafy tao amin'ny kaonty Twitter-ny, nefa tsy nanamafy ny fotoana hiverenany.
Podcast 9 × 19: namely ny freins i Apple ... indray
Amin'ity herinandro ity dia mamakafaka ny tsaho izahay fa nanapa-kevitra ny hampihemotra ny vaovao goavany ho an'ny iOS 12 hatramin'ny taona 2019 i Apple hifantoka amin'ny fampisehoana.
Mijanona amin'ny sonia ny dikanteny rehetra i Apple alohan'ny iOS 11.2.5
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia nijanona tsy nanao sonia ny iOS 11.2, iOS 11.2.1 ary ny iOS 11.2.2, mba tsy hahafahanay midina ambany intsony hanararaotra ny jailbreak hipotetika izay hivoaka amin'ny teoria.
Facebook dia mamoaka ireo fitsipiny manokana momba ny fiainana manokana 7 ary hanome anao fifehezana bebe kokoa amin'ny angon-drakitrao
Facebook dia mamoaka ny fitsipiny 7 momba ny fiainana manokana momba ny angon-drakitra ary te hanampy ny mpampiasa hifehy bebe kokoa amin'izay zarain'izy ireo amin'ny Internet
Ny telovolana tsara indrindra amin'ny tantaran'ny Apple dia tonga noho ny iPhone X
Miara-miasa amin'ny € 1.100 izay vidin'ny iPhone X tsirairay avy, Apple dia nahavita nahatratra izay faratampony ara-bola farany tsara indrindra teo amin'ny tantara.
Ny rindrambaiko HomePod vaovao dia hanavao avy hatrany amin'ny app Home
Ny fomba fiasa HomePod dia voasivana. Ny zava-drehetra dia hofehezina amin'ny alàlan'ny fampiharana Home izay ahafahantsika manavao ny rindrambaiko an'ny fitaovana Apple vaovao.
Apple mankalaza an'i Rio Carnival amin'ny alàlan'ny horonantsary vaovao mampiroborobo ny iPhone X
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia tsikaritra indray amin'ny alàlan'ny fampiroboroboana ny maodely sary vaovao an'ny iPhone X amin'ny vanim-potoanan'ny Fetibe Rio.
Apple manemotra ny fanovana lehibe an'ny iOS hifantoka amin'ny glitches
Taorian'ny volana vitsivitsy nanaovan'ireo olana momba ny rindrambaiko mampiady hevitra dia toa tapa-kevitra ny hifantoka amin'ny zava-bita i Apple ary hampihemotra ny iOS 12 vaovao
Apple no orinasa nividy mpikirakira betsaka indrindra tamin'ny taona 2017
Ny orinasa Cupertino dia lasa mpamatsy vola semikonduktor lehibe indrindra tamin'ny taona 2017.
Ny iPhone an'ny 2018 dia mety hahatratra 4 GB RAM
Apple koa dia manatevin-daharana an'ity politika fitomboana ity amin'ny alàlan'ny fampidirana 4 GB RAM amin'ireo fitaovana natomboka nandritra ny taona 2018.
Ireo mpampiasa HomePod miaraka amin'ny iTunes Match na ny famandrihana Apple Music dia afaka miditra amin'ny tranombokiny amin'ny alàlan'ny Siri
Tsikelikely, ireo tovolahy avy any Cupertino dia mampiala antsika amin'ny fisalasalana. Ny vaovao farany dia hita ao amin'ny fampifanarahana ny iTunes Match sy ny tranomboky voatahiry ao anaty rahona miaraka amin'ny HomePod, tranomboky iray izay azontsika fehezina amin'ny alàlan'ny Siri
Tonga ao amin'ny CarPlay i WhatsApp alohan'ny Apple Watch
Manomboka izao dia ho afaka mankafy ny WhatsApp amin'ny interface interface an'ny CarPlay ianao, afaka mahazo fampandrenesana amin'ny efijery fiaranao
Gaga i Apple tamin'ny gala Grammy tamin'ny karaoke mihetsika roa nataon'i Animojis
Ny zazalahy Cupertino dia miseho amin'ny endrika kanto amin'ny Grammy Awards miaraka amina karaoke vaovao roa miaraka amin'i Animoji malaza.
OverCl0ck, ny jailbreak Apple Watch vaovao ho an'ny watchOS 3
Sparkes dia namoaka jailbreak vaovao ho an'ny watchOS 3, ny rafitra fiasan'ny Apple Watch, antsoina hoe OverCl0ck. Na dia tsy mandeha aza izany dia hanampy amin'ny fampivoarana azy ny fiaraha-miasa amin'ireo hackers hafa.
Ho tonga amin'ity taona ity ny iPhone X Plus raha ny filazan'i Ming-Chi Kuo
Mandritra ny taona 2018 dia hanana maodely roa amin'ny tsipika iPhone X isika ary ny iray amin'izy ireo dia ho fantatra amin'ny anarana hoe iPhone X Plus ary hanana 6,5 santimetatra
Ny bateria ao amin'ny "L" no ho avin'ny iPhone
Apple dia miasa amin'ny fividianana bateria misy endrika "L" ho an'ireo fitaovana vaovao izay manomboka eny an-tsena.
watchOS 4.3 mamerina ny tranomboky mozika iPhone anao amin'ny Apple Watch
Iray amin'ireo fiovana tsy takatry ny saina sy manelingelina indrindra amin'ny watchOS 4 io, fa tamin'ny farany toa toa nanome i Apple ...
Toy izany no fiasan'ny audio HomePod adaptive
Ny HomePod dia mampifanaraka ny feo avoakany amin'ny efitrano misy azy noho ny haitao vaovao sy ny fandaminana miavaka ataon'ireo mpandahateny.
Apple dia mandefa ireo teboka voalohany amin'ny HomePod vaovao
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia mandefa ny toerana voalohany an'ny HomePod vaovao, horonan-tsary vaovao izay manangona fandikana sary ny feo aharesy lahatra antsika amin'ny toetran'ny mpandahateny Apple vaovao.
Ny iPhone SE 2 dia mety ho tonga tsy ho ela ary miaraka amin'ny famahana finday
Ny iPhone SE 2 an'ny Apple dia mety manana famandrihana tsy misy tariby toy ny iPhone X na iPhone 8, saingy i Apple kosa dia hamela ny kompana True Depth izay hanary ny terminal hita maso 3D.
Ireo fiara mitondra tena an'i Apple dia mitombo hatrany
Mazava izahay fa Apple dia miloka amin'ny tetikasany Titan amin'ny fomba matotra rehefa manambara ny media sasany fa ny ...
Sonos dia mamaly amin'ny fihenam-bidy amin'ny famoahana HomePod
Ny orinasan-tsoa toa an'i Sonos dia tsy afaka nijanona ho mpandalo, ary noho izany dia nanomboka hetsika iray hisarihana ny varotra amin'ity fanombohana ity.
Fiovana amin'ny fomba fandoavam-bola amin'ny FaceID ao amin'ny iOS 11.3
Toy izao no nahazoan'ny iPhone X fanitsiana kely tamin'ny fomba fampiasantsika ny FaceID hanaovana fifanakalozana ao amin'ny App Store amin'ireo toerana hafa.
Ny Vondron Eropeana dia mitentina 1.000 miliara euro ny Qualcomm
Ankoatra ny raharaham-pitsarana miandry, Qualcomm dia nahazo lamandy 997 tapitrisa euro avy amin'ny Vondrona Eropeana.
Ahoana ny fametrahana ny taratasy fanamarinana nomerika amin'ny iPhone
Hasehonay aminao ny fomba ahafahanao mametraka ny mari-pahaizana nomerika amin'ny iOS amin'ny fomba mora mahagaga hahafantarana ny tenanao amin'ireo fitantanan-draharaham-panjakana.
Ny fametrahana ny HomePod dia hitovy amin'ny fampahavitrihana ny AirPods
Apple dia namorona rafitra iray ka amin'ny alàlan'ny fitondrana iPhone sy dingana vitsivitsy vitsivitsy hanombohana ny fanamboarana ny HomePod, amin'ny fampiasana ny iCloud Keychain sy Siri.
Inona no mampiavaka ny HomePod amin'ireo mpifaninana aminy? Manazava i Tim Cook
Manohy manao bingo amin'ny HomePod izahay, ny mpandahateny mahay avy amin'ny orinasa Cupertino dia manohy mandray lohateny lehibe manerana ny ...
Apple dia misy Messages ao amin'ny iCloud ao amin'ny iOS 11.3
Nampian'i Apple ny safidy Messages in iCloud tao amin'ny beta voalohany an'ny iOS 11.3 rehefa avy nampiato azy tao amin'ny kinova voalohany an'ny iOS 11.
Nilaza i Apple fa ampiasaina isan'andro amin'ny fitaovana maherin'ny 500 tapitrisa i Siri
Vao nanambara ny tarehimarika hampiasana Siri i Apple, tarehimarika izay mampiseho amintsika fa mihoatra ny 500 tapitrisa ny mpampiasa mampiasa Siri matetika
Podcast 9 × 18: Tapitra ny fiandrasana, eto ny HomePod
Izahay dia mamakafaka ireo vaovao izay niseho nandritra ny herinandro manodidina ny Apple sy ny haitao amin'ny ankapobeny, ankoatry ny famaliana ireo fanontaniana avy amin'ireo mpihaino anay.
Ny vaovao rehetra ao amin'ny iOS 11.3 Beta 1
Apple dia nanangana ny Beta voalohany an'ny iOS 11.3 miaraka amin'ny fanovana lehibe toy ny Animoji vaovao sy ny fanatsarana ny fitantanana bateria, ankoatry ny hafa.
Manampy ny Instagram ho an'ny GIF ny tantarany malaza
Ny Instagram dia manavao ny fampiharana azy amin'ny alàlan'ny fanampiana ny GIFs miaraka amin'ny haitao GIPHY amin'ireo tantara malaza mba hahatonga azy ireo ho mpidoroka sy hahafinaritra kokoa.
Fividianana ITunes, podcast, ary na dia Beats 1 aza, ao amin'ny HomePod daholo
Ny HomePod dia afaka mitendry podcast antsika, mihaino ny tambajotram-peo Beats 1, ary na dia mividy avy amin'ny iTunes aza.
Ny tolotra finday sy fibre an'i Pepephone dia nanjary "tsy azo ihodivirana" tokoa, fantaro miaraka aminay
Pepephone matetika dia manolotra zavatra mihoatra ny zavatra mora vidy, manome koa fahatokisana fa tsy misy miafina ao ambadik'ireto isa ireto izay manampy ny faktioranao amin'ny faran'ny volana.
Mieritreritra ny HomePod? Antenainay fa mahay teny anglisy ianao
Toy ny nitranga tamin'ny marika hafa, ny HomePod dia tsy ho hita amin'ny teny anglisy amin'ny daty fanombohana voalohany
Ny HomePod dia ho maimaim-poana ary handray baiko avy amin'ny mpampiasa maro
Miresaka momba ny sasany amin'ireo fiasa manaitra indrindra amin'ny HomePod izahay, ny voalohany izay tsy hoferana ho an'ny mpampiasa tokana izany.
Nanaitra i Tim Cook ary nanolotra ny kabariny tao amin'ny Oniversite Duke tamin'ny alàlan'ny Animoji
Manaraka ny dian'ny Steve Jobs i Tim Cook ary handray anjara amin'ny fizarana diplaoman'i Duke University, ary ny zavatra tsara indrindra dia ny nahatonga an'io fanambarana io ho lasa Animoji.
Mino i Netflix fa hanolotra ny serivisy video streaming miaraka amin'ny Apple Music i Apple
Ao amin'ny antso fidiram-bola farany nambaran'ny Netflix, nilaza ilay orinasa fa Apple dia mety mikasa ny hiara-manolotra ny Apple Music sy ny serivisy vidéo mivantana izay iasàny.
Ny HomePod dia ho hita amin'ny 9 Febroary any Etazonia, Aostralia ary UK
Ny kaomandy mialoha ho an'ny mpandahateny marani-tsaina an'i Apple, ny HomePod, dia hanomboka amin'ny 26 Janoary ary hanomboka amin'ny 9 Febroary ny varotra ofisialy. Na dia any amin'ny firenena telo ihany aza, amin'izao fotoana izao.
Manasa anao handefa GIF ny tavanao haingana sy mora i Gboard
Gboard, ny kitendry Google ho an'ny iOS, izay nanisy fiasa sy fahaiza-manao vaovao izay mahaliana kokoa azy.
Apple dia hampitsahatra ny iPhone X amin'ny faran'ny taona 2018
Ny ain'ny iPhone X? Manantena ny mpandinika fa fohy dia fohy izy io, ary nanondro mivantana izy ireo fa hesorin'i Apple amin'ny katalaogna rehefa aseho ireo singa vaovao amin'ity taona ity
Naseho ny antsipiriany vaovao momba ny fomba hifehezana ny HomePod
Ny sarin'ny fampiharana Home miaraka amin'ny fikirakirana sy fanaraha-maso HomePod dia naseho, ary koa ny sarin'ny efijery ambony miaraka amin'ny fanaraha-maso ny volavola.
John Bennett dia miresaka momba ny fifandraisana tsara amin'ny FBI amin'i Apple
Ny lehiben'ny vondrona FBI San Francisco, John Bennett, dia nitantara ny fifandraisan'ny masoivoho amin'ny Big Apple ho tena tsara, namela ny olan'ny lasa.
Ny iPhone 8 dia nivarotra tsara kokoa noho ny iPhone X tamin'ny telovolana farany tamin'ny taona
Ny fanadihadiana iray dia nanambara fa ny iPhone 8 dia namidy indroa mihoatra ny iPhone X any Etazonia, miaraka amin'ireo maodely antitra mbola amidy amin'ny taha tsara.
Disney dia nahazo manager iTunes teo aloha ho an'ny sehatra streaming ho avy
Ny taona 2018 no taona ahitantsika ny isan'ny serivisy horonantsary streaming mitombo manomboka amin'ny ...
Tim Cook: Tsy mino ny fampiasana teknolojia tafahoatra aho
Tim Cook, CEO an'ny Apple, dia nanome ny fomba fijeriny manokana momba an'io, ary tsy ratsy velively.
Infuse dia manatevin-daharana ny hafanam-po iPhone X Dark Mode
Infuse, ny mpilalao tsara indrindra ho an'ny iPhone, iPad ary Apple TV antsika, dia navaozina farany niaraka tamin'ny maody maizina andrasana ho an'ny iPhone X
Ny HomePod dia efa manana ny tombo-kasen'ny FCC: akaiky ny fahatongavany
Apple dia efa manana ny takiana farany amin'ny famarotana HomePod: ny tombo-kase FCC mamela azy hamidy any Etazonia
Mino ny TSMC fa hihena ny varotra finday avo lenta amin'ity taona 2018 ity
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra TSMC dia hihena ny varotra finday avo lenta amin'ity taona 2018. Hisondrotra ny eo anelanelany sy ny farany ambany
Kristen Wiig dia manatevin-daharana ireo mpilalao sarimihetsika izay hilalao andiany iray amin'ny serivisy streaming Apple
Mpilalao tantara an-tsehatra Kristen Wiig dia hilalao hatsikana vaovao ho an'ny serivisy video streaming vaovao izay ifantohan'i Apple ny ezak'izy ireo.
30.000 XNUMX $ ho an'ny logo Macintosh amin'ny boaty iray
Toy izao no mety hiafaran'ny maherin'ny 30.000 hoso-doko "Macintosh" hanantonana ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'izay te-handoa izany.
Apple dia efa nanamboatra ny olana "rohy voaozona"
Raha ny fahitana azy dia naneso ny hamaha ity olana ity ireo mpiara-dia Cupertino, ny beta farany dia toa mamaha izany.
WhatsApp dia mamela anao hilalao horonan-tsary YouTube avy amin'ny chat
Ankehitriny isika dia afaka milalao horonantsary YouTube mivantana ao anaty chat nefa tsy mila ajanona intsony, na mijanona tsy miresaka.
Tonga ny WhatsApp for Business, ny switchboard an'ny Customer Service dia nifindra tany amin'ny chat malaza
Ny zalahy avy amin'ny WhatsApp dia sahy nandefa WhatsApp for Business, fampiharana manokana ho an'ireo orinasa hanomezana fanampiana ny mpanjifa amin'ny alàlan'ny fampiharana fandefasan-kafatra mailaka malaza.
Voatora-bato ny bus mpitily mpiasan'ny Apple maro
Ny sasany amin'ireo bisy natolotr'i Apple ho an'ny mpiasany dia notoraham-bato nandritra ny diany nankany amin'ny biraon'i Apple tany Cupertino.
Podcast 9 × 17; folo taona an'ny MacBook Air, vaovao sy lainga
Manamarika ny fiandohan'ny podcast antsika ny tsingerintaona faha-XNUMX an'ny MacBook Air, ary koa ny vaovao hafa amin'ny herinandro sy ny lainga vitsivitsy navoaka.
Apple dia nahatratra ny laharana fahenina tao amin'ny Top 100 an'ny orinasa teknolojia
Ireo tovolahy ao amin'ny Apple dia tsy nanomboka tsara tamin'ny laharana vaovao ahitantsika ireo orinasa teknolojia manan-danja 100 manerantany.
Ho afaka hahita ny fahasalaman'ny baterintsika isika ary hanitsy ny zava-bita amin'ny fanavaozana amin'ny ho avy
Nanamafy i Tim Cook fa hanamboatra ny olana momba ny bateria sy ny fahombiazan'ny iPhone ao anaty fanavaozana ho avy i Apple.
Ny ho avin'ilay boky mifandray dia antsoina hoe Universale
Farany afaka mahazo fidirana amin'ny tahiry iraisampirenena isika, izay ahafahantsika mahita nomeraon-telefaona, olona na orinasa, hahafahana mifandray isaky ny mila izany isika, na inona na inona fandaharam-potoanan'ny finday avo lenta.
Ny banky vaovao dia tonga ao amin'ny Apple Pay any Etazonia sy Azia
Ireo no banky farany nanatevin-daharana ny rafitra fandoavam-bola tsy misy fifandraisana avy any Cupertino any amin'ireo firenena voalaza etsy ambony.
Ahoana ny fomba hijerena ny tantaram-pividiananao amin'ny Apple Pay
Tianay aseho anao ny fomba hahitanao ny tantaran'ny fandaniana natao tamin'ny karanao amin'ny Apple Pay mivantana avy amin'ny iPhone.
Apple sy HBO dia mifaninana amin'ny zon'ny fandefasana ny andiany JJ Abrams ho avy
Samy mitady ny zon'ny fampielezam-peo amin'ny andiany sci-fi ho avy tsy ho ela i HBO sy i Apple.
Inventec dia mety nandefa ny HomePods voalohany tany Apple
Inventec, iray amin'ireo mpivarotra HomePod an'ny Apple, dia afaka nandefa ny singa voalohany tany Cupertino ho an'ny varotra manaraka.
Ny iPhone no fitaovana niasa indrindra tany Etazonia nandritra ny telovolana farany tamin'ny 2017
Tao anatin'ny andro vitsivitsy taorian'ny famoahana ny valin'ny Apple, ny tatitra ivelany dia hanamafy fa ny iPhone no fitaovana niasa indrindra indrindra nandritra ny telovolana farany tamin'ny 2017.
Fanararaotana iray hafa amin'ny mpamatsy an'i Apple, tsy mahafeno ny fenitra fiarovana izy ireo
Toa ireo mpamatsy ny chassis sy casings dia tsy manaraka ny fenitra kalitao apetraky ny orinasa Cupertino.
Ny fihenan'ny iPhone dia hihena ny habeny amin'ny fanontana ho avy
Raha ny angom-baovao, ny "notch" an'ny iPhone dia mety hampihena ny habeny amin'ny fanontana ho avy noho ny fampidirana ny Face ID mivantana eo amin'ny fakan-tsary voalohany.
Apple nilefitra ary hamela ireo mpampiasa WeChat handefa indray ireo torohevitra amin'ny alàlan'ny fampiharana
Manoloana ny fitakian'i Tencent, tompon'ny WeChat, Apple dia nifarana ary nanaiky torohevitra ao anatin'ny fampiharana indray miaraka amin'ny fanavahana ny kaomisiona Apple.
Ny iOS App Store dia hihoatra ny indostrian'ny sarimihetsika amin'ny taona 2018
Ny mahagaga antsika dia ny haben'ny orinasan'ny AppStore mandritra ny taona 2018, antenaina hihoatra ny indostrian'ny sarimihetsika izy io.
LXORY Signature dia manolotra ny AirPower-Style Dual Qi Charger
Raha miandry ny famoahana ny AirPower ny mpampiasa Apple, ny base charge nirkabel izay mamela antsika hiara-hiasa amin'ny fitaovana 3 miaraka, ny orinasa LXORY, dia namoaka vokatra mitovy amin'izany amin'ny vidiny mirary tokoa.
Mankalaza ny Andro Martin Luther King Jr i Apple amin'ny alàlan'ny fandokoana ny tranokala anglisy
Ny Alatsinainy fahatelo amin'ny volana Janoary dia ankalazaina isan-taona amin'ny Andron'i Martin Luther King Jr, iray amin'ireo olona manan-kery sy manan-danja indrindra eo amin'ny sehatry ny zon'olombelona amerikana.
Cycle voajanahary, fampiharana fanabeazana aizana eo afovoan'ny resabe
Fampiharana iray izay mampanantena ny fahombiazany ho toy ny fomba fanabeazana aizana lehibe indrindra no ivon'ny ady hevitra
Ny Governemanta India dia manamboatra làlana hanokafana ireo fivarotana Apple
Ny governemanta indiana dia nanova ny habetsaky ny fampiasam-bola azon'ny orinasa vahiny atao eto amin'ny firenena, 49% ka hatramin'ny 100%, izay ahafahan'ny Apple manokatra Apple Store voalohany eto amin'ny firenena nefa tsy mila mivarotra vokatra vita.
Ny horonantsary voalohany an'ny Apple Park tamin'ny taona 2018 dia efa mampiseho ny tontolo maitso manodidina azy
Mialoha ny famoahana farany ny Apple Park, voasivana horonantsary vaovao miaraka amina drone izay ahitantsika ny toetran'ny tafo maitso ao amin'ny Apple Park.
Nanamafy i Apple fa hadisoana ny hafatra fifindra-data iCloud
Ny mpampiasa sasany any ivelan'i Shina dia mahazo fampandrenesana ihany koa fa hafindra any Shina ny angon-drakitra, avy any Cupertino manamafy fa lesoka izany.
Ny Apple Watch koa dia tsy tongasoa ao amin'ny The White House.
Ny kabinetra fandriam-pahalemana White House koa dia nanisy lisitra mainty ireo fitaovana manokana navela hiambina
Ny faharefoana ao amin'ny WhatsApp dia mahatonga ny resaka miafina tsy misy dikany
Io no fomba tsy fahitan'ny lesoka fiarovana hita vao haingana tao amin'ny WhatsApp fa tsy misy ilàna azy intsony ny resaka enao.
Electra, jailbreak vaovao navoakan'i Coolstar ho an'ny iOS 11-11.1.2
Coolstar, mpamorona fanta-daza, namoaka an'i Electra, jailbreak ho an'ny iOS 11 ka hatramin'ny iOS 11.1.2. Ny hany lesoka dia ny tsy fametrahana Cydia amin'ny fitaovana.
Raiki-tahotra any Hawaii tamin'ny fahatongavan'ireo hafatra vonjy taitra noho ny balafomanga tamin'ny iPhones
Misafotofoto tao Hawaii taorian'ny nanombohana iPhones tamim-pahadisoana fampandrenesana momba ny fandrahonana voalaza fa balafomanga ary nangataka ny olona hitady fiarovana.
Apple dia lasa mpanamboatra solosaina fahefatra, rehefa avy nivarotra singa 20 tapitrisa tamin'ny 2017
Nandritra ny taona lasa, ny varotra Mac, raha ny tombatombana voalohany ary raha tsy misy ny fanamafisana ofisialy, dia nahatratra 20 tapitrisa ny singa.
Siri dia mianatra zava-misy vaovao momba ny fifaninanana golf sy tennis
Ilay mpanampy virtoaly iOS, Siri, dia nandalina ny fampahalalana momba ny fifaninanana tenisy sy golf tena manandanja indrindra ary koa ny mombamomba ireo mpilalao tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Apple dia namoaka horonantsary vaovao manasongadina ny maody fakana sary amin'ny iPhone X
Apple dia nandefa horonantsary vaovao tao amin'ny fantsona YouTube izay nanasongadinany, indray, ireo toetra natolotry ny maody fakana sary an'ny iPhone X
Phillips dia manolotra ny fanavaozana ny takamoa Hue, ny dingana lehibe nilaina
Phillips dia manolotra ny fanavaozana lehibe ny jiro marani-tsaina Hue, izay hitondra takamoa ho amin'ny ambaratonga vaovao amin'ny alàlan'ny famelana antsika hamorona fakana am-peo miaraka amin'ny iPhones sy Macs.
Nihemotra hatramin'ny martsa-aprily ny fanoloana bateria IPhone 6
Ny fangatahana avo lenta avy amin'ireo mpampiasa izay te hanararaotra ny programa fanoloana batery dia nahomby tokoa ka nitatra hatramin'ny roa volana ny fotoana fiandrasana.
Apple dia hanohy hivarotra vokatra AirPort vaovao ao amin'ny Apple Stores
Niato tamin'ny fivarotana ny vokatra AirPort Wi-Fi azy i Apple dia tsy midika hoe nandao ireo vokatra manana an'ity haitao ity izy.
iOttie miloka amin'ny charger tsy misy tariby isaky ny zoro
iOttie dia nanolotra maodely samihafa ho an'ny charger tsy misy tariby mandritra ny CES any Las Vegas, miaraka amina endrika sy vahaolana mahaliana
Ny iPhone X dia taraiky aoriana amin'ny varotra any Espana
Ny iPhone X dia tsy naneho tarehimarika manintona ao amin'ny firenena, fa namela tahirin-kevitra mahamenatra any Espana noho ny fiheverany ny fanavaozana azy.
Ny angon-drakitra momba ny fahasalamana dia porofon'ny fandikana izany
Ny angona nangonina tamin'ny fampiharana Health an'ny iPhone dia azo ampiasaina hanamelohana olona voalaza fa nanolana tany Alemana taorian'ny fanapahana nataon'ny polisy ny terminal.
Podcast 9 × 16: 2017 sy 2018, lasa sy ho avin'ny Apple
Ny fizarana voalohany tamin'ny taona nijerenay ny fomba fampisehoana nataon'i 2017 ho an'ny Apple, ary koa ny faminaniantsika sy ny firarianay ny taona 2018.
Ny fanavaozana ny WhatsApp dia mihoatra ny "fanamboarana bibikely" fotsiny
Tianay foana ny mijery kely lalindalina kokoa amin'ny vaovao WhatsApp, ary amin'ity iray ity dia nahita iray izay antsipiriany hita maso izahay, ovay ny manga ho volondavenona.
Ny fivarotana IPhone X dia manampy ny fitomboan'ny iOS manerantany
Manaiky ny mpandinika fa ny varotra iPhone X dia nanatsara ny fitomboan'ny iOS tamin'ny 2017, fa ny any Shina ihany.
Apple mamindra ny angona iCloud an'ireo mpampiasa sinoa mivantana any amin'ny fireneny
Apple dia nanapa-kevitra ny hamindra any Chine ireo mpizara izay misy ny angon-drak'ireo mpampiasa avy amin'ny firenena Aziatika.
Fipoahana ara-toekarena vaovao ho an'i Apple any UK izay tsy maintsy mandoa 136 tapitrisa pounds
Ary ny tsy hamelantsika ny iray izay hidirantsika amin'ny iray hafa, ny mpitantana Apple dia tokony hieritreritra rehefa mahita ...
Tsy mandao an'i Apple i Jimmy Iovine, te hanao mahaliana kokoa aza izy
Ilay mpamokatra mozika, ary mpikambana ao amin'ny Apple Music, Jimmy Iovine dia namoaka fanambarana mandà ny fialany amin'ny orinasa ary milaza mazava fa hijanona ao amin'ny Apple izy mba hanao fivoaran'ny streaming.
Pokémon GO dia hampitsahatra ny fahazoana miditra amin'ireo fitaovana tsy mifanaraka amin'ny iOS 11
Niantic dia nanambara fa ireo fitaovana tsy afaka manavao ny iOS 11 ireo dia tsy ho afaka hiditra amin'ny Pokémon GO amin'ny fanavaozana manaraka.
May ny bateria iray hafa ao amin'ny Apple Store any Valencia
Ny bateria mandoro sy ny Apple Store any Valencia dia mahery fo indray mandeha ao anatin'ny fotoana fohy. Ora vitsy lasa izay…
Alpine dia manolotra ny efijery mitsingevana miaraka amin'i Apple CarPlay ao amin'ny CES
Hatramin'izao, Alpine dia mbola iray amin'ireo marika marika amin'ny tontolon'ny feo ao ...
Fibaro dia manolotra ny HomeKit mifanentana Smart Switch antsoina hoe ny bokotra
Fibaro dia nanolotra ny bokotra The Button, bokotra iray ahafahantsika manasokajy hetsika isan-karazany amin'ny bokotra tokana, hetsika mifanaraka amin'ny fitaovana mifandraika amin'ny HomeKit.
Apple Store any Suisse no nafindra toerana noho ny bateria
Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana dia voaroaka ity magazay ity noho ny setroka misy poizina ateraky ny batery iray amin'ny toe-pahasalamana.
JUUK Velo, tady vy vaovao kalitao ho an'ny Apple Watch
JUUK Velo dia fehin-kibo metaly vaovao ho an'ny Apple Watch izay misafidy famolavolana mahazatra fa misy loko hafa tsy mitovy amin'ny famantaranandrontsika.
Ny mpandalina dia mametraka ny LG hanao ny haitao Apple Face ID
Nahazo isa ny LG tato anatin'ny taona vitsivitsy noho ny fikasan'i Apple hisaraka tsikelikely amin'ny ...
Colgate koa dia manatevin-daharana an'i AI amin'ny Apple Store ihany
Ny Colgate Smart Electronic Toothbrush dia borosy nify artifisialy amidy irery ao amin'ny Apple Store.
Mahafinaritra ny mihaona famantarana izay hita ao amin'ny Apple Store voalohany any Korea
Apple dia manomana ny famoahana ny Apple Store vaovao any Seoul amin'ny alàlan'ny fametrahana ireo afisy nentim-paharazana mba hampiroboroboana antsika izay manondro fa faly izy ireo mifanena amintsika.
Apple hanatsarana ny fanaraha-maso ataon'ny ray aman-dreny manoloana ny tsy fahatokisan'ny mpampiasa vola
Ny taratasy avy amin'ny mpamatsy vola tamin'ny herinandro lasa teo mikasika ny krizy ara-pahasalamam-bahoaka manodidina ny ankizy sy ny fampiasana teknolojia vaovao dia nahatonga an'i Apple hilaza fa miasa amin'ny endrika vaovao izy ireo amin'ny fifehezana ny ray aman-dreny.
Diagnostika teo aloha ary iray isaky ny iPhone: Ny fepetra takiana amin'ny fanovana bateria
Toy izao no tadiavin'ny orinasa mametra ny fanovana bateria amin'ny alàlan'ny andiana fitakiana sy fombafomba hisorohana ireo mpitrandraka vola.
Ny iPhone SE 2 dia miaraka amina vera miverina
iPhone SE 2, telefaona iray izay mety hahatafiditra vera aorian'ny famoahana farany.
Creative dia manambara ny mpandaha-teny marani-tsainy sy ny zavatra hafa voalohany ao amin'ny CES 2018
Mamelabelatra Speaker WiFi vaovao miaraka amin'i Alexa, Modely mifanentana amin'ny mpanampy virtoaly roa nohavaozina ny Creative Creative amin'ny CES 2018
Canary dia manambara fakan-tsary vaovao, mora vidy kokoa ary fampifanarahana Alexa
Canary dia mampiseho amintsika ny rindrambaiko vaovao ho an'ny fakantsary fanaraha-maso sy maodely vaovao mora vidy kokoa, Canary View.
Misalasala bebe kokoa momba ny isan'ny iPhone X amidy hatramin'izao
Ny mpandalina CLSA dia manome toky fa ireo mpampiasa izay efa naniry iPhone X tamin'ny volana desambra 2017 dia efa nahavita izany, noho izany ny tarehimarika ho an'ny telovolana voalohany amin'ny Apple dia tsy ho avo kokoa noho ny tamin'ny telovolana farany tamin'ny 2017.
Apple dia namoaka ny iOS 11.2.2 ho an'ny bibikely manamboatra iPhone sy iPad
Apple dia namoaka iOs 11.2.2 hanamboarana lesoka fiarovana Meltdown sy Spectre ary koa lesoka fiarovana hafa amin'ny iPhone, iPad, ary iPod Touch tohanan'ny.
DJI dia mandefa ny OSMO MOBILE 2, ny gimbal vaovao nohatsarainy amin'ny vidiny ambany
Ireo tovolahy ao amin'ny DJI dia manatsara ny gimbal-n'izy ireo amin'ny finday amin'ny alàlan'ny fandefasana ny DJI OSMO MOBILE 2, ilay gimbal iPhone vaovao izay mampihena ny vidiny raha oharina amin'ny kinova teo aloha.
Apple dia miatrika fitsarana 23 noho ny fampihenana ireo iPhones taloha
Apple dia nanomboka ny taona nanangona, hatramin'ny daty namoahanay ity lahatsoratra ity, mihoatra ny 23 ny fitsaram-bahoaka ataon'ny mpampiasa sy ny fikambanana izay voafitaky ny tsy mety nataon'i Apple sy ny tsy fahampian'ny fampahalalana momba an'io.
Ny Samsung Galaxy S9 dia hanana fampiasa iPhone X
Ny processeur vaovao an'ny Exynos an'ny Samsung dia mampiditra endri-javatra izay mampatsiahy ny iPhone X, ary ho avy tsy ho ela amin'ny Galaxy S9.
Spotify dia miatrika fitoriana $ 1.6 miliara
Wixen Music Publishing dia nitory an'i Spotify tao amin'ny fitsarana federaly any California noho ny filalaovany ny hirany tsy misy fahazoan-dàlana. Mangataka fanonerana 1.6 miliara dolara sy fepetra fisorohana izy ireo.
Apple dia miloka amin'ny rakitra ary ny voalohany dia 'Home'
Apple te hiditra amin'ny sehatry ny andiana fanadihadiana. Ary araka ny fantatra, ny anaram-boninahitra voalohany tonga dia Home
Jimmy Iovine handao an'i Apple amin'ny volana Aogositra
Ny iray amin'ireo mpitantana Beats Music izay nanatevin-daharana an'i Apple taorian'ny nahazoana azy dia handao ny orinasa monina any Cupertino amin'ny volana aogositra ho avy izao.
Miaraka amin'i Tim Cook dia indroa ny fahatarana raha tsy amin'i Steve Jobs
Any Apple, ny fahatarana dia lasa ara-dalàna loatra, araka ny nambaran'ny lahatsoratra iray avy amin'ny WSJ izay manome angona tena mahaliana.
Ny charger Wireless dia ny fahatezerana rehetra: Belkin dia mamoaka ny zava-baovao 2018
Belkin dia nanolotra ireo fitaovana vaovao niaraka tamin'ny famandrihana tsy misy tariby izay hanomboka amin'ity taona 2018 ity, ary izay mety indrindra amin'ny iPhone 8, 8 Plus ary X
Apple dia manatevin-daharana ny consortium audiovisual izay miandraikitra ny codec AV1 ho avy
Apple dia miditra ao amin'ny Alliance for Open Media amin'ny fikatsahana ny codec AV1 mba hahatratrarana rakitra rakitra avo lenta sy avo kokoa.
Mamaky firaketana ny App Store: varotra 300 tapitrisa amin'ny Taombaovao
Apple dia nanambara tamin'ny fanambarana iray fa nandritra ny Andron'ny Taom-baovao dia nihoatra ny 300 tapitrisa dolara no voaangona tamin'ny fividianan'ireo mpampiasa manerantany.
The Apple Developer Program, maimaimpoana amin'ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana
Izany dia zavatra tsy maintsy ho tonga na ho ela na oviana na oviana satria ny orinasa Cupertino mihitsy no nampita izany ...
Nanamafy i Apple fa misy fiantraikany amin'ny iPhone, iPad ary Mac ny Specter sy Meltdown
Apple dia namoaka fanambarana ofisialy manamarina fa ny solosain'izy ireo dia iharan'ny fahalemena fantatry ny Meltdown sy ny Spectre
TSMC dia mety ho mpamatsy tokana an'ny chip A12 manaraka an'ny Apple amin'ity taona ity
Amin'ny herintaona i Apple dia mikasa ny handefa fitaovana vaovao izay afaka mitondra azy ireo ny chip A12 vaovao izay novolavolaina tany Cupertino, angamba ny hany mpamatsy an'io puce io dia ny TSMC Taiwanese.
Amin'ny fahatongavan'i iOS 11.2.5 izao dia hanoro ireo Podcasts i Siri
Ny zava-baovao farany dia manondro mivantana ny tolotra Podcasts rehefa nanontany an'i Siri izahay ny vaovao momba ny andro.
Ny iMac Pro dia mety misy ny coprocessor A10 Fusion ao anatiny
Ny ranomaso farany fitandremana farany anatiny dia nahita coprocessor vaovao, ireo rehetra ireo dia manondro fa mety ho ilay A10 Fusion.
Apple hampiato ny fivarotana iPhones 16 tapitrisa noho ny programa fanoloana bateria
Ny programa fanoloana bateria ho an'ny iPhone 6 mandroso dia hahita ny orinasa monina any Cupertino hitsahatra tsy hivarotra iPhones 16 tapitrisa amin'ity taona ity.
Amazon sy Google dia nampidina ny vidin'ny mpandahateny marani-tsainy
Raha ny filazan'ny mpandinika sasany dia samy nampidina ny vidin'ireo mpandahateny marani-tsaina na Google na Amazon alohan'ny hahatongavan'ny HomePod tsy ho ela, ka izany dia mampiseho fa ny maha-mpandalina dia asa tsy mitaky fahalalana lehibe, farafaharatsiny mba tsy asehon'izy ireo azy ity tranga ity
Apple hanolotra valim-bola voalohany amin'ny taona 1 Febroary
Ny 1 febroary no andro nofidian'i Apple hanambara amin'ny fomba ofisialy ny valim-bola amin'ny telovolana voalohany an'ny Big Apple.
Apple mividy Buddybuild hanatsarana ireo fitaovana mpamorona iOS
Ny orinasa voalohany novidian'ny Apple tamin'ny taona 2018 dia Buddybuild, tovovavy iray mikendry ny hanamora ny fomba fifandraisan'ny mpizara, ny fivarotana fangatahana ary ny mpamorona.
Tsia, tsy handefa ny toeranao any amin'ny polisy amin'ny alàlan'ny maody SOS ny iPhone-nao
Ny iray amin'ireo fiasa tsy ananan'ny iPhone dia ny mandefa ny toeranao any amin'ny polisy amin'ny alàlan'ny fanindriana ny bokotra Power in-dimy.
Ny bateria IPhone dia hosoloina na dia mandalo ny diagnostika an'ny Apple aza izy
Ny tsaho farany dia milaza fa mety nifindra tamin'ny mpiasa tao amin'ny magazay ara-batana i Apple mba hanova ny batterie-n'ireo mpampiasa mangataka azy ireo, na dia efa lavorary aza izy ireo.
Misy vintana 40% azon'ny Apple Netflix, hoy ny mpandinika
Raha ny filazan'ireo mpandinika Citi dia misy vintana 40% hahazoana ny Netflix i Apple, ilay sehatra misy sehatra streaming lehibe indrindra eto an-tany
Snow no olana farany ao amin'ny Apple Store vaovao any Chicago
Ilay Apple Store vaovao sy ankehitriny, angano any Chicago, miorina amoron'ny ony Michigan dia tsy natao hanoherana ny oram-panala mavesatra any an-toerana, mampiseho olana goavana amin'ny famolavolana.
Inona no azontsika antenaina amin'ny Apple amin'ny 2018
Fintininay izay ho hitantsika amin'ny taona 2018 sy izay hitanay araka ny tsaho momba ny fanombohana Apple vaovao
Tim Cook dia nahatratra 100 tapitrisa dolara mahery tamin'ity taona ity
Nahazo an'i Tim Cook nandritra ny taona izay nifarana 102 tapitrisa dolara, ka ny 3 amin'izany dia ny karamany
Manatsara ny rafitry ny hetra i Shina hanamorana ny fampiasam-bola ataon'ny orinasa toa an'i Apple
Sina amin'ny hazakazaka ho lasa firenena manan-danja indrindra eto amin'izao tontolo izao dia nanambara ny tsy fandoavan-ketra ho an'ireo orinasa vahiny te-hampiasa vola ao amin'ny firenena.
Nanamafy i Saurik fa hisy fitaovana telo hatramin'ny jailbreak iOS 11
Ny jailbreak iOS 11 dia velona kokoa noho ny hatramin'izay. Saurik, mpamorona an'i Cydia, dia nanamafy ny fanombohana fitaovana telo hanatanterahana izany.
Apple dia efa manomboka manolotra ny fiovan'ny bateria amin'ny € 29
Rehefa avy nanambara ny datin'ny faran'ny volana janoary ho toy ny fanombohana ny fanoloana bateria amin'ny $ 29, Apple manitsy ary manamafy fa efa misy izy ankehitriny.
iFixit manaparitaka ny vidin'ny kitapo fanoloana bateria ho valin'ny fihetsiky ny Apple
Apple dia nanapa-kevitra ny hanova ny batterin'ny iPhones izay mihisatra. iFixit dia hampihena ny vidin'ny kitapony hanovana ny batterie amin'ny fomba rustika alohan'ny fihetsiky ny paoma lehibe.
Ny adihevitra momba ny bateria iPhone: andao hamafana ny raharaha
Niaraka tamin'ny resabe nandritra ny herinandro maro izahay momba ny fomba hanamafisan'ny Apple ny fitaovana izay nidina ny bateria ary efa ...
Orinasa lamaody italiana no nandresy tamin'ny ady nifanaovana tamin'i Apple noho ny fampiasana ny anarana "Steve Jobs"
Apple dia tsy afaka nahazo orinasa italiana hijanona amin'ny fampiasana ny marika Steve Jobs ho an'ny tsipika fitafiany
Apple mikasa ny hanokatra Apple Store voalohany any Saudi Arabia amin'ny 2019
Ny drafitra ho avy Apple dia ny hanokafana ny Apple Store voalohany any Arabia Saodita, noho ny fanohanan'ny governemanta ny firenena.
Apple dia mampihena ny fanovana bateria ho $ 29 ary manambara vaovao ao amin'ny "slowgate"
Apple dia hampidina ny fanovana bateria ho $ 29 mandritra ny herintaona hanamorana ny tetezamita ary hisorohana ny slowgate araka izay azo atao.
Instagram mandefa ireo lahatsoratra vaovao atolotra ao amin'ny fahana
Instagram dia nanisy fanolorana lahatsoratra vaovao sy mampiady hevitra amin'ny famahanana mba hahafahantsika mandany fotoana bebe kokoa amin'ny Internet.
Nandritra ny taona faha-XNUMX nisesy, ny iPhone dia mitana ny lisitry ny activations any Etazonia
Mandritra ny taona iray hafa, ny iPhone indray dia mitarika ny laharan'ny fitaovana ampandehanana mandritra ny Noely any Etazonia
Inona ny doka tsara indrindra nataon'i Apple tamin'ny 2017?
Izahay dia mieritreritra fa efa nahita ny ankamaroan'ireo fanambarana Apple ireo saingy ... inona no fanambarana tsara indrindra tamin'ny taona 2017?
MacX DVD Ripper Pro, ny fomba tsara indrindra handravana DVD sy hanovana ireo rakitra video
Tsy mora sy haingana kokoa noho ny MacX DVD Ripper Pro izao ny famaky ny DVD mianakavy na ny sarimihetsika
Control Spotify avy amin'ny Apple Watch, tonga i Nuuzic
Oh Apple ... Mania inona no mahatonga azy ho sarotra amin'ny Spotify sy ireo mpifaninana aminy amin'ny faritra samihafa, zavatra izay lojika ...
Sintomy ny sary an-tsary miaraka amin'ny volavolan'ny efijery an'ny iPhone X vaovao
Ataovy miavaka, ary asehoy ny iPhone X vaovao misy sary mihetsika amin'ny Blueprints miaraka amin'ny famolavolana ny efijery an'ny iPhone X vaovao
Ny Apple Watch dia mety hahatratra singa 27 tapitrisa amidy amin'ny taona ho avy
Eo an-dàlana ny tarehimarika Apple Watch handrava ireo rakitsoratra rehetra napetraka mandritra ny taona manaraka, araka ny loharanom-baovao ao amin'ny rojom-pamokarana.
Tsy azonao atao ny manome alalana ny fividianana zanakao amin'ny alàlan'ny Face ID
Ity dia zavatra tsapako hatramin'ny nampiasako ny iPhone X, fa izany ...
Google dia hanokatra magazay manokana any India hanamafisana ny varotra Google Pixel 2
Google dia maniry ny Google Pixel 2 ho lasa mpanolo-tsaina hafa any India, ary te hanokatra fivarotana azy manokana ao amin'ny firenena mandritra ny taona manaraka.
Apple dia mety hiafara amin'ny fametrahana processeur MediaTek amin'ny tsy fisian'ny Qualcomm
Inona no hoeritreretinao momba ny processeur MediaTek an'ny Apple? Raha fantatrao ny rafitra, dia mangovitra ianao.
Raha tsy misy ny HomePod, ity Noely ity dia nomena ny Amazon Echo
Ity no toetran'ny Alexa eo an-tampon'ny tampon'ny fampidinana ao amin'ny iOS App Store noho ny varotra vokatra Echo.
Ny rafitra fanamafisana optika tsara indrindra amin'ny smartphone dia ao amin'ny Galaxy Note 8
Ny rafitra fanamafisana optika tsara indrindra amin'ny finday avo lenta, azontsika jerena ao amin'ny Galaxy Note 8
LiberTV dia misy izao, ny jailbreak ho an'ny Apple TV 4K miaraka amin'ny iOS 11-11.1
Hita izao ny LiberTV, ilay fitaovana ahafahanao manenjika ny Apple TV 4 sy 4K izay manana tvOS 11 na tvOS 11.1 napetraka.
Tsy misy tarika mainty intsony ao amin'ny YouTube: ny app iOS dia hampifanaraka ny horonantsary amin'ny endrik'ilay efijery
Ny fanavaozana ny YouTube manaraka dia hanao veloma ny blazes mainty mahafaly sy feno fankahalana, satria ny horonantsary dia ampifanarahina amin'ny endrik'ilay efijery
Apple dia manakarama mpanatanteraka telo an'ny Amazon amin'ny sehatry ny horonantsary
Ny fihetsik'i Apple farany teo amin'ny sehatry ny horonantsary mivantana dia mampiseho amintsika ny fomba nanakaraman'izy ireo ekipa mpanatanteraka Amazon Prime Video telo
Eric Schmidt dia nidina ho CEO Alphabet
Tamin'ny alàlan'ny fanambarana an-gazety fohy dia nanambara ny fametraham-pialana ho CEO an'ny Eric Schmidt i Alphabet taorian'ny 17 taona tao amin'ny Google ary 3 tao amin'ny Abidia.
Ny ao anatiny dia tonga amin'ny iOS ary tsy azonao hadino izany
Playdead dia manolotra antsika ny fahombiazany Inside ho an'ny mpampiasa iPhone, iPad ary Apple TV. Sangan'asa izay hahasarika anao hatramin'ny voalohany.
Manenjika an'i Apple izy ireo noho ny fampihenany ny fitaovana misy batterie taloha
Ny vondrona mpampiasa US dia manenjika an'i Apple noho ny olana ateraky ny bateria amin'ireo fitaovana taloha.
Telegram X, nohamarinina kokoa ary manokana ho an'ny iPhone X
Telegram dia mandefa fampiharana vaovao "Telegram X" voaatsara kokoa sy haingana kokoa ary azo ampanjifaina miaraka amina lohahevitra maizina mety tsara ho an'ny iPhone X
Hitsin-tanana 3D Touch: ny lisitra miavaka amin'ny asany rehetra
Izahay dia nanomana ny lisitra voafaritra momba ny hitsin-dàlana 3D Touch izay azo ampiasaina amin'ny iOS ankehitriny, mahita azy ireo izao.
Apple hampitombo ny fahaizan'ny bateria iPhone amin'ny taona 2019
Ny paoma lehibe dia mamolavola bateria vaovao ho an'ny iPhone manaraka satria hiasa amin'ny zava-misy izy ireo ary mila hery bebe kokoa.
Ny iPhone X dia hanafaingana ny fiovan'ny fitaovana finday any Shina
Ny iPhone X vaovao dia mety ho tompon'andraikitra amin'ny fanavaozana maro ny iPhone taloha alohan'ny fotoana, na dia ho an'ny hafa hifindra monina avy amin'ny Android mankany iOS aza.
Miala tsiny i Readdle ary mamoaka fanavaozana Spark maika hafa
Readdle dia afaka nanao zavatra haingana ary namoaka fanavaozana maika izay mamaha olana lehibe sasany izay nahatonga ny fampiharana tsy ho azo ampiasaina.
Mampandeha ny iPhone ny Apple, tsara ve sa ratsy?
Tsara kokoa ve sa ratsy kokoa amin'ny Apple ny mampihena ny fitaovanao hisorohana azy tsy hidina ary hampitombo ny fizakan-tenany? Isa ho an'ny sy hanohitra.
Apple dia manohy manangona mpiasa ho an'ny serivisy horonantsary mivantana
Araka ny filazan'ny magazine Variety dia nanitatra ny isan'ny mpitantana izay ao anatin'ny vondrona serivisy VOD ho avy i Apple.
Navaozina i AutoSleep miaraka amin'ny fanohanan'ny Apple Watch sy ny iPhone X vaovao
Ny fampiharana ny torimaso torimaso, AutoS Sleep, dia novaina mamela antsika hanao ny dingana rehetra amin'ny alàlan'ny fampiasana ny Apple Watch fotsiny.
Apple Pay dia ho tonga any Polonina amin'ny fiandohan'ny taona ho avy
Ny zava-drehetra dia toa manondro fa i Apolonia no firenena manaraka handray Apple Pay amin'ny tànana malalaka, na dia tara volana vitsivitsy aza.
Apple dia manamafy fa mampiadana ny fitaovana misy olan'ny bateria izy io
Apple dia nanamafy izay efa niahiahantsika rehetra taorian'ny vaovao farany: mampiadana ny iPhones taloha hikarakarana ny bateria izy
Nitaraina an'i Apple ny orinasa sinoa noho ny sary famantarana App Store
Orinasa iray teratany sinoa dia nanapa-kevitra ny hitory ny orinasa Cupertino noho ny fisandohana tamin'ny sary famantarana ny App Store.
Fizarana vaovao amin'ny podcast isan-kerinandro anaovantsika dinika amin'ireo mpamorona ny headphone Dotts Vantablack ary mamakafaka vaovao hafa.
Apple dia mikasa ny hampivondrona ireo fampiharana ho an'ny iOS sy macOS
Apple mikasa ny hamela ny fampiharana cross-platform hiasa amin'ny iOS sy macOS, angamba hanambatra ireo fivarotana fampiharana roa aza.
Ny «starwars» sy ny «rajako» dia miditra amin'ny tenimiafina ratsy indrindra tamin'ny 2017
Toy ny isan-taona dia nisy ny tatitra navoaka miaraka amin'ny tenimiafina ratsy indrindra nampiasaina tamin'ny taona 2017, anisan'izany ny "starwars", "hello" na "rajako".
HomeKit dia manohy manampy orinasa, miankina amin'i Sylvania ity
Ny fisarihana ny HomeKit tamin'ity taona lasa ity dia tena zava-dehibe raha dinihintsika ny isan'ny orinasa izay ...
Apple dia namoaka ny beta faharoa an'ny iOS 11.2.5
Manomboka amin'ny 19:00 amin'ny ora Espaniola dia misy ho an'ny mpamorona ity kinova iOS ity.
Apple hanao fivorian'ny tompon-tany isan-taona ao amin'ny Steve Jobs Theatre
Apple dia manamafy fa ny fivoriana ankapobeny an'ny mpandray anjara amin'ny taona 2018 dia hatao ao amin'ny Steve Jobs Theatre vaovao any Apple Park.
Geekbench dia manamafy fa miankina amin'ny batterie ny fahombiazan'ny iPhone
Fitsapana bebe kokoa no manamarina fa minia mampihena ny fitaovana misy olana amin'ny bateria i Apple mba hisorohana ny famonoana tsy ampoizina.
Ny Apple Store voalohany any Korea Atsimo dia hisokatra amin'ny 30 Desambra
Manidy ny taona i Apple amin'ny fisokafan'ny Apple Store vaovao, any Seoul, renivohitr'i Korea Atsimo izy io, ary i Angel Ahrendts dia eo am-panokafana azy.
Ny iPhone X dia mampihena ny ora fandefasana azy fa misy fisalasalana momba ny fangatahany
Ny fotoana fandefasana ny iPhone X dia mihena ary ny mpandinika iray dia maneho fa mety ho famantarana ny fangatahana ambany izany amin'izao fotoana izao.
Vaovao avy amin'i Noel Gallagher sy Sam Smith tonga irery amin'ny Apple Music
Noel Gallagher sy Sam Smith dia sahy manana atiny manokana ho an'ny Apple Music, ka tafiditra ao anatin'ny paikady exclusivity an'ny Apple Music.
Apple TV dia niverina tany Amazon roa taona taorian'ny fisotroan-dronono
Enim-bolana taorian'ny nanambarana ny fanombohana ny fampiharana Amazon Prime Video ho an'ny Apple TV, dia amidin'ny Amazon indray ity fitaovana ity ao amin'ny fivarotana an-tserasera
D-Link dia manolotra ireo fakantsary fanaraha-maso miniany vaovao
D-Link dia manolotra ireo fakantsary fakan-tsary vaovao izay misongadina amin'ny haben'ny habeny fa misy fampiasa tsara sy fampiharana iPhone hifehezana azy ireo
Apple manemotra ny fahatongavan'i iTunes ao amin'ny Windows Store amin'ny taona ho avy
Apple dia nanambara tamin'ny fiandohan'ity taona ity fa iTunes dia hamely ny Windows Store amin'ny Desambra. Tamin'ny alàlan'ny fanambarana iray no nanambaran'izy ireo fa tsy ho tonga izy io amin'ny taona ho avy.
Canary dia hanampy ny olona hahita ny fakantsary fiarovana
Nanambara fanatsarana ny fakantsary fiarovana azy i Canary izay ho tonga amin'ny fiandohan'ny taona 2018, toy ny fahitan'ny olona.
Ny rafitry ny Face ID dia tsy noforonina velively hampiantrano endrika samihafa amin'ny fotoana fohy
Face ID no rafitra mamoha ny iPhone X, fantatsika izao fa noforonina tsy misy fanantenana ao anatin'ny fotoana fohy manampy tarehy marobe amin'ilay rafitra.
Apple dia tsy manamboatra bibikely mifandraika amin'ny iMessages ao amin'ny iOS 11.2.1
Bug izay mifandraika amin'ny iMessages dia mbola tsy namboarina tamin'ny fanavaozana rehetra navoakan'i Apple taorian'ny namoahana ny iOS 11.
Vidio androany dia raiso rahampitso, izy no paika vaovao an'ny Apple amin'ny varotra Krismasy anao
Ny fomba Amazon dia izay ataon'i Apple any Etazonia, Espana ary ny sisa amin'ireo firenena ao amin'ny ...
Ity patanty ity dia mampiseho ny fomba nandrenesan'i Siri antsika nibitsibitsika
Siri dia afaka mianatra mibitsibitsika ary mahatsikaritra fa miresaka aminy amin'ny bitsibitsika isika. Fantatsika izany noho ny patanty navoakan'i Apple tamin'ny 2016.
Google Play Music nohavaozina hanohanana ny iPhone X vaovao
Google dia manohy manavao ireo fampiharana azy hampifanaraka azy ireo amin'ny iPhone X ary amin'ity indray mitoraka ity dia manavao ny Google Play Music izy ireo hanohanana ilay iPhone vaovao.
Disney dia mahazo ny ankamaroan'ny Fox amin'ny $ 52.400 miliara
Ny orinasa Walt Disney dia nanamafy ny fividianana ampahany lehibe amin'ny 21st Century Fox ho an'ny $ 52.400 miliara.
Apple dia manitatra ny fiantohana Mac mandritra ny telo taona any Nouvelle Zélande
Miaraka amin'ny fitsipika vaovao hitantsika fa ny New Zealanders sy aostraliana dia hankafy hatramin'ny herintaona fanampiny.
Neato manavao ny fampiharana sy ny robot miaraka amin'ny endri-javatra mandroso kokoa
Neato dia manavao ny fampiharana azy sy ireo robot D3 sy D5 Connected mba hanolotra anay ny sarintany fandrakofana sy ny statistika ho an'ny programa tsirairay
Apple miloka amin'ny Finsar, mpamorona sensor VSEL
Raha ny fahitana azy dia faly tamin'ny valiny aroson'izy ireo ny orinasa ary $ 390 tapitrisa toa fomba tsara hanehoana azy.
Apple dia mamoaka ny betas voalohany an'ny iOS 11.2.5, ny watchOS 4.2.2 ary ny tvOS 11.2.5
Nandritra ny ora maro taorian'ny famoahana ny iOS 11.2.1 ho an'ny besinimaro, Apple dia namoaka ny iOS 11.2.5 Beta voalohany ho an'ny mpamorona.
Brezila efa handray Apple Pay
Hatramin'ny nanolorana ny Apple Pay, ny teknolojia fandoavam-bola tsy misy tariby Apple dia nihanaka manerantany ....
Manatevin-daharana ny tarika ARKit i Lego miaraka amin'ny fampiharana AR vaovao, Lego AR-Studio
Tsy afaka milaza isika fa mijanona amin'ny lafiny rehetra i Lego ary kely kokoa raha mijery sary mihetsika isika, ...
Nandefa ny World Effects niaraka tamin'ny zava-misy marobe ho an'ny Messenger i Facebook
Tsy sasatra ny maka tahaka ny zava-drehetra mifandraika amin'ny Snapchat i Facebook, ka izany no antony hamoahany ny World Effects vaovao, ny vokatra vaovao ho an'ny Facebook Messenger.
9 × 14 Podcast: Tonga eto ny iMac Pro
Mandinika ny vaovaon'ny herinandro lasa izahay, ao anatin'izany ny fanombohana ny iMac Pro sy ny fividianana an'i Shazam avy amin'i Apple
Ny Instagram dia hahafahanao manaraka mora foana
Nanapa-kevitra ny Instagram ny handray ny rafitra tenifototra ahafahan'ny mpampiasa mahita lohahevitra mahaliana azy ireo haingana kokoa.
Apple dia nahavita asa injeniera tamin'ny efijery OLED an'ny iPhone X
Ny filoha lefitra misahana ny varotra vokatra Apple dia nanamafy fa ireo injenierany dia tsy maintsy miasa mafy amin'ny efijery OLED an'ny iPhone X.
Google nandefa fampiharana fakana sary vaovao roa ho an'ny iOS
Ireo tovolahy avy amin'ny Google dia sahy mandefa fampiharana sary vaovao roa ho an'ny iOS mba hanangonana vaovao sy hanatsara ny AI orinasa.
Anil Sethi dia nandao ny fizarazaran-fahasalamana an'i Apple ka nahita an'i Ciitizen
Anil Sethi, no lohan'ny fizarana Apple izay niandraikitra ny fanatsarana ny fampiharana ara-pahasalamana ...
Fampahalalana bebe kokoa momba ny fitrandrahana iOS 11.1.2, hanana Jailbreak ve isika?
Google dia nanambara antsipiriany misimisy kokoa, fa ny zava-dehibe momba ny vaovao dia ny manazava raha manakaiky ny Jailbreak amin'ny iOS 11 ity fanararaotana ity na tsia.
Ny Google Home Max, mpifaninana mivantana amin'ny HomePod, dia mamely ny tsena
Ny Google Home Max dia mijanona eto, eny, tsy dia mora vidy izany, andao jerena izay misy azy.
Misy ny mpanendaka maka iPhones 40 avy amin'ny Apple Store any Valencia
Tao amin'ny magazay Colón Apple any Valencia no nitrangan'ny halatra, nandritra io maraina io ihany ary ankehitriny ...
Ny varotra Apple dia manohitra ny marika sinoa
Toa miatrika ny vanim-potoana vaovao amin'ny telefaona antonony ny orinasa Cupertino.
Voamarina: Apple mividy Shazam
Apple dia manamafy ny fividianana ny rindrambaiko fankatoavana mozika Shazam ho an'ny tarehimarika iray izay tsy voamarina fa tokony ho 400 tapitrisa dolara.
Samsung miloka amin'ny scanner iris mialoha ny fanekena ny tarehy
Samsung dia handao ny fanekena ny tarehiny ho an'ny iris scanner amin'ny fitaovana vaovaony naseho tamin'ity taona ity
YouTube dia afaka nanangana serivisy mivantana mozika vaovao
Amin'ny volana martsa ho avy izao, afaka mandefa serivisy mozika mivantana i YouTube mba hifaninana aminao aminao amin'ny Spotify sy Apple Music
Banky vaovao manohana ny Apple Pay
Nandritra ny herinandro faharoa nisesy dia nanitatra ny isan'ny banky sy andrim-bola mpampindram-bola i Apple, saingy any Rosia, Kanada ary Japon no misy azy.
Ireo no fandikana voalohany mety ho iPhone XC
Apple dia afaka mandefa ny iPhone XC amin'ny taona ho avy miaraka amin'ny efijery LCD sy ny teknolojia mitovy amin'ny iPhone X, saingy mora vidy kokoa.
Afaka nividy an'i Shazam sy ny rafitry ny fanekeny mozika i Apple
Apple dia afaka nahazo an'i Shazam afaka andro vitsivitsy ho an'ny 400 tapitrisa dolara tsy azo iadian-kevitra, ary azo ambara ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Jony Ive dia mifehy indray ny volavolain'i Apple
Jony Ive dia tompon'andraikitra mivantana amin'ny famolavolana ao Apple taorian'ny roa taona natokana ho an'ny fananganana ny Apple Campus
Apple manampy Screensaver amin'ny rivotra any Los Angeles vaovao amin'ny Apple TV 4K
Apple dia namoaka pikantsary fiaramanidina vaovao ho an'ny Apple TV 4K izay ahitàna ny tanànan'i Los Angeles avy amin'ny rivotra.
Ny iOS 11.2 dia misy lesoka fiarovana HomeKit, saingy raikitra izao
Hitan'izy ireo ny lesoka amin'ny fiarovana amin'ny HomeKit izay efa vahan'i Apple ampahany raha miandry ny vahaolana voafaritra izay ho tonga tsy ho ela
Ny IPhone dia mitohy ho fakantsary malaza indrindra Flickr
Flickr dia iray amin'ireo tranonkala malaza indrindra amin'ny Internet. Ny finday finday finday no fitaovana be mpampiasa indrindra. Ary ny marika malaza indrindra dia ny iPhone
Azonao atao ny mahafantatra hoe firy minitra ny mozika nolalaovinao nandritra ny taona 2017 tao Spotify
Raha mpanaraka mahatoky ny Spotify ianao dia sambatra ianao satria nanangana tranokala ny serivisy hahitana ny angon-drakitra ataonao mandritra ny 2017.
Newton Kalandrie, kalandrie vaovao ho an'ny iOS
Avy amin'ireo mpamorona an'i Newton ihany, ny mpanjifa mailaka, Newton Calendar dia tonga aty aminay mba hameno ilay voalohany. Fifanarahana tsotra sy mahitsy.
Apple dia manampy ny Apple Watch amin'ny programa fanodinana azy
Ireo tovolahy avy ao Cupertino dia manampy ny Apple Watch ho fitaovana mendrika amin'ny programa fanodinana orinasa ahafahantsika mahazo vola.
Doka an'ny Apple «The Rock + Siri. Kitiho ny andronao »no doka fahavalo be mpijery indrindra ao amin'ny YouTube
Apple dia nandefa ny doka: The Rock + Siri. Kitiho ny andronao, miaraka amin'ilay mpilalao sarimihetsika malaza, ny iPhone 7 ary i Siri ho ...
Ny iOS 11 dia efa napetraka amin'ny 59% amin'ireo fitaovana tohanan'ny
Ny tahan'ny fananganana iOS 11 dia 59%, teboka 7 ambony tamin'ny volana lasa teo, na dia ambany noho ny an'ny iOS 10 aza ny angona.
Moon, fakantsary fanaraha-maso izay mamoaka
Moon by 1-Ring dia fakantsary vaovao misy rafitra fihodinana 360º izay mivoaka amin'ny fotony ary miharo amin'ny HomeKit, Google Home ary Amazon Alexa.
Podcast 9 × 13: Saika Krismasy ao Apple
Podcast isan-kerinandro ao amin'ny Apple sy ny haitao amin'ny ankapobeny izay miresaka momba ny vaovao farany, ny hevitra momba ny fampiharana sy ny maro hafa.
Fampitahana ireo fomba haingana indrindra hampihenana ny iPhone
Raha mbola tsy azonao antoka hoe iza no charger tsara indrindra hampiasana famandrihana haingana amin'ny iPhone X anao, eto izahay dia manazava ny fisalasalanao
Nanambara ny Instagram fa manana kaonty orinasa mihoatra ny 25 tapitrisa izy
Nahatratra kaonty orinasa 25 tapitrisa ny Instagram, izay nahasarika ny sain'ny mpanjifa ny orinasa.
Nilaza i Jimmy Iovine fa tsy manambola ny serivisy mozika mivantana
Raha ny filazan'i Jimmy Iovine, avy amin'ny mozika mivantana fotsiny dia tsy azo atao ny miaina eo amin'ny tontolon'ny mozika, noho izany Spotify dia tsy maintsy mamorona ny tenany na ho ela na ho haingana
Apple dia handoa ny vola 13.000 tapitrisa takian'ny Vondrona Eropeana amin'ny taona ho avy
Efa ho herintaona sy tapany taorian'ny nanaovan'ny UE fanadihadiana an'i Apple tany Irlanda dia nanapa-kevitra ny handoa ilay 13.000 XNUMX tapitrisa euro nifanarahana ny orinasa amerikana